Serivisy serivisy sy serivisy ampiana serivisy | Sunson
Manomeza marika ny tenanao amin'ny serivisy ampiana lanjany anay!
Fanatsarana ny marika
1. Manampy fampidirana marketing mba hampifaly sy hitazomana ny mpanjifanao.
2. Famerenana ireo vokatrao ao anaty boaty namboarina, amin'ny fombanao tianao.
3. Ny kitapom-batsy sy ny fivondronana dia manatsara ny fantsom-bokatrao ary manatsotra ny fizarana fizarana.
4. Ny lableling dia dingana manahirana nefa manan-danja ka raisinay ho anao izany, ary apetrakao araka ny tokony ho izy ny marika mba hahazoana antoka ny fahitana ireo vokatrao.
Amin'ity tsena mivezivezy haingana ity, izay miha-fohy ny boriborin'ny vokatra ary manana marika marobe isafidianana ny mpanjifa, dia tena zava-dehibe tokoa ny fotoana sy ny tsena ary hamaritra ny fahombiazan'ny orinasa.
Sunsoneorot Supply Chain Services (SCS) dia manome serivisy fampitaovana farany ho an'ny OEM (Mpanamboatra Fitaovana Original), ODM (Mpanamboatra endrika orina), EMS (mpanome serivisy mpanamboatra elektronika) ary mpamokatra singa elektronika, ahafahan'izy ireo manatsara ny rojom-pamokarany .
Amin'ny maha-mpaninjara eran-tany antsika dia manolotra traikefa "fivarotana tokana" ho an'ny mpanjifa ny linecards malalaka ananantsika noho ny filan'izy ireo mamolavola sy manome azy ireo. Ny fahaiza-manao sy ny fitaovana ampiasain'ny ekipanay Chain Supply dia mamela anao hampihena ny vidinao amin'ny fahazoana ara-nofo, hampitombo ny kapitalanao miasa nefa hankafy ny fahafaha-manangona fitaovana arak'izany, hampitombo ny anjaranao sy ny tombom-barotra azonao.
Mandoa sy mividy serivisy agents
Afaka manome anao ny serivisy fandoavam-bola maimaim-poana amin'ny orinasa izahay.
1688.com/Taobao.com/jd.com serivisy maso fiantsenana
Taobao.com sy tranokala sinoa hafa dia tsy manaiky PayPal! Izahay dia mamela anao handefa fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Paypal ary avy eo handoa ny mpamatsy amin'ny alàlan'ny mpanome vola Shinoa izahay! Manolotra fiarovana lehibe kokoa anao rehefa mividy amin'ireo mpamatsy China!
Amin'ny fampiasana ny traikefa fiantsenana taobao an-taonany maro, hanome toro-hevitra anao izahay momba ny fahamendrehan'ny mpivarotra sy ny toro-làlana hafa Taobao.com…
Izahay dia afaka manome ny fividianana, agents, inspect, fandefasana eran'izao tontolo izao ny vokatra ary serivisy kalitao ambony dragon ho anao, misy serivisy fanampiny ampiana ho anao raha mila izany ianao.